Andiany faha-25 : Nahemotra amin’ny volana septambra ny hetsika Donia -
AccueilSongandinaAndiany faha-25 : Nahemotra amin’ny volana septambra ny hetsika Donia
Andiany faha-25 : Nahemotra amin’ny volana septambra ny hetsika Donia
Hetsika iray fanao isan-taona any Nosy Be. Raha isaka ny faran’ny herinandron’ny pantekôsta no hanatanterahana ny Donia isan-taona, dia nahemotra amin’ny volana septambra izany amin’ity andiany faha-25 ity. Ny 26 ka hatramin’ny 30 septambra no hanatanterahana izany. Araka n y fanazavana nentin’ny komity mpikarakara dia ny datin’ny faran’ny herinandron’ny pantekôsta nifanindry tamin’ny fotoanan’ny Ramadany, ho an’ny mpino silamo no anton’ny fanakisahana ny daty. Nosy anisan’ireo be mpino silamo rahateo i Nosy- Be sy ireo tanàna manodidina azy. « Tsy nety tamin’izy ireo ny fanaovana fety ao anatin’ny Ramadany, antony niresahan’izy ireo taminay mpikarakara ny hanemorana ny hetsika », araka ny fanazavan’i Sanna Vincezo, avy amin’ny komity mpikarakara. « Tsy ireo mpino silamo ihany anefa no nangataka izany, fa ireo namana sy fianakavian’izy ireo ihany koa », hoy hatrany izy. Taorian’ny fakan-kevitra tamin’ireo mponin’i Nosy-Be no nanapahana ny datin’ny 26 ka hatramin’ny volana Septambra.
Toa ny isan-taona dia santarina amin’ny fifidianana izay andriambavilanitra tsara bika aman’endrika amin’ny Donia ny hetsika izay hatao ny 22 septambra. Mahazatra ihany koa ny fanokafana ny hetsika amin’ny alalan’ny filaharam-be ao Nosy Be Hell-ville miaraka amin’ireo hery velona rehetra. Ny 27 septambra no hanatanterahana izany, izay arahin’ireo fampisehoana isan-kariva eny amin’ny Kianjan’Ambodivoanio.
Anisan’ireo tanàna handrezatra hetsika ara-kolontsaina i Nosy Be, satria taorian’ny Nosy Be Jazz Festival, dia tontosa ny volana mey teo ny Libertalia festival tany amin’ny Nosy Manitra. Hanohy izany ny Sômaroho hiarahana amin’i Wawa ny fiandohan’ny volana aogositra, ary anisan’ny hetsika atao any an-toerana ihany koa ny Nosy-Be Symphonie, ho an’ny mozika Klasika. Rakotra hetsika ara-kolontsaina ity Nosy ity raha maina sy tsy manana na dia hetsika ara-kolontsaina na dia iray aza ny faritra sasany.
Mihazakazaka ny famoaham-bokatra tsy ôfisialy taorian’ny latsa-baton’ny fihodinana faharoa amin’ny fifidianana Filoham-pirenena, ny 19 desambra teo. Lany Dada, nahazo salan’isa 56,9% raha 43,1% ny an-dRajoelina. Araka izany, ho an’ny Faritra Analamanga manokana, mandresy tsy misy ...Tohiny